Jonga iinjongo zeMathematika amagama
Le yifayile yeemathematika eziqhelekileyo ezisetyenzisiweyo kwi-arithmetic, geometry, algebra, kunye namanani.
Abacus - Isixhobo sokubala sokuqala esisetyenzisiweyo kwisistim esiyintloko.
Ixabiso elingenasiphelo - Njalo inani elihle, libhekise kumgama wenani ukusuka ku-0, imida ihamba kakuhle.
I-Angle Acute - Umlinganiselo we-angle kunye nomlinganiselo phakathi kwe-0 ° no-90 ° okanye nge-radi ° engama-90 °.
Yongeza - Inani elibandakanyekayo ukongezelela.
Amanani ayongeziweyo ayabonwa njengezibonelelo.
BEDMAS okanye i-PEDMAS Inkcazo
Curve Curve okanye Ukusasazwa okuqhelekileyo
Ibhokisi kunye ne-Whisker Inkcazo / Isatifiketi- Ukubonakaliswa kwesigcaziso seenkcukacha ezenza ulwahlulo kwizabelo. Uluhlu lwezigaba zedatha.
I-Calculus - Isebe leemathematika ezibandakanya izixhobo ezivela kunye nezibandakanya. Uphononongo lwenkqubela apho iinguqu zokufunda zifundiswa.
Amandla - Isixa esiza kubanjwa.
Icentimeter - Umlinganiselo wobude. 2.5cm i malunga intshi. Iyunithi yeetriki yokulinganisa.
Umngcipheko - Umgama opheleleyo ujikeleze isangqa okanye isikwere.
I-Chord - Icandelo elibandakanya amabini amabini kwisangqa.
I-Coefficient - Into ebalulekileyo yekota. x i-coefficient kwikota x (a + b) okanye 3 ingumlingani kwikota 3 y.
Izinto eziqhelekileyo - Into eyenziwa ngamanani amabini okanye ngaphezulu. Inombolo eya kukwahlula ngqo kumanani ahlukeneyo.
Iibhontshi ezongezelelweyo - Iimpembelelo ezimbini zibandakanyeka xa isixa sino-90 °.
Inombolo edibeneyo - Inombolo enomxholo ubuncinane enye into ngaphandle kweyodwa. Inombolo edibeneyo ayikwazi ukuba yinombolo yokuqala.
Ikhonkco - Ubume obumgangatho obuthathu kunye ne-vertex eyodwa, eneesiseko setyhula.
Icandelo leConic - Icandelo elenziwe ngumbambano wendiza kunye neqhekeza.
Isiqhelo - Ixabiso elingatshintshiyo.
Ukulungelelanisa - Ibini elidiweyo elichaza indawo kwindawo yokudibanisa. Ukusetyenziswa ukuchaza indawo nendawo okanye isikhundla.
I-Congruent - Izinto kunye namanani anesayizi kunye nobujamo obufanayo. Imilo ingaguqulelana ibe yinye ngeflip, ukujikeleza okanye ukujika.
I-Cosine - Umlinganiselo wobude (kwicala elincinci elincinci) kwicala elikufuphi ne-angle ekhangelekileyo ukuya kubude be-hypotenuse
Isilinda - Ubume obumgangatho obuthathu obunomjikelezo ojikelezayo kunye nomphetho ngamnye kwaye uhlanganiswe nomgangatho ovalwe.
I-Decagon - I-polygon / ifom ephethe iingalo ezilishumi kunye neendlela ezilishumi ezichanekileyo.
I-Decimal - Inombolo yangempela kwisiseko seshumi inkqubo yokubala yokulinganisa.
Idenominator - I-denominator yinqanaba eliphantsi leqhekeza. (Inombolo yeyona nombolo ephezulu) I-Denominator iyonke inani lamalungu.
I-Degree - Iyunithi ye-angle, ii-angles zilinganiswa kumadireyi aboniswe ngesimboli se-degree: °
I-Diagonal - Icandelo lomgca edibanisa ii-vertic ezimbini kwi-polygon.
I-Diameter - I-chord edlulayo kwiziko lesangqa. Kwakhona ubude bomgca obunqamle ukuma kwisiqingatha.
Ukwahluka - Ukwahlukana yinto efunyenweyo xa inani elinye lisuswe kwelinye. Ukufumana ulwahlulo kwinani kufuna ukusetyenziswa kokukhupha.
I-digit - Iimpawu ezibhekiselele kubalo. I-176 inomboro yeenombolo ezi-3.
Ukwahlula - Inombolo eyahlula. Inombolo efunyenwe ngaphakathi kubakaki.
Uhlula - Inombolo eyenza ukwahlula. Inombolo efunyenwe ngaphandle kwebhanki yecandelo.
Umgca - Umgca ojoyina ipolgoni okanye umgca (umda) apho ubuso obombili budibanisa kwisigxina sesithathu.
Ellipse - I-ellipse ibonakala njengesangqa esicwecwe esincinane. Ikhefu lendiza. Ama-Orbits athatha uhlobo lwe-ellipses.
Indawo yokuphela - 'Iphuzu' apho umgca okanye ikhava iphela.
I-Equilateral - Wonke amacala alinganayo.
Ukulinganisa - Isitatimende esibonisa ukulingana kwamagama amabini ngokuqhelekileyo ahlukaniswe ngemimiselo yesobunxele neyiyo kwaye ihlanganiswe ngumqondiso olinganayo.
Nani Inani - Inani elingahlulwa okanye lihlukaniswe ngu-2.
Isiganeko - Ngokuqhelekileyo kubhekisela kwisiphumo sokunokwenzeka.
Uphendule imibuzo efana nokuthi 'Yintoni enokwenzeka ukuba umnini-moya uya kuhlamba ngokubomvu?'
Hlola - Ukubala inani lexabiso.
Umxhasi - Inombolo enika ingxelo malunga nokuphindaphinda okuphindaphindiweyo kuyadingeka. Ixabiso eli-3 4 liyi-4.
Iimpawu - Iimpawu ezimela amanani okanye imisebenzi. Indlela yokubhala into esebenzisa amanani kunye nemiqondiso.
Ubuso - Ubuso bubhekisela kumlo ophethwe yimida kwizinto ezi-3 eziqhelekileyo.
I-Factor - Inombolo eya kwahlula ibe enye inamba ngqo. (Iimeko ezili-10 zi-1, 2 ne-5).
I-Factoring - Inkqubo yokwahlula amanqaku kuwo onke amanqaku abo.
Notation Factorial - Ngokuqhelekileyo kwi-combinatorics, kuya kufuneka ukuba ukwandise inani elilandelelanayo. Isimboli esisetyenzisiweyo kwi-factorial notation! Xa ubona x !, I-factorial ye x iyadingeka.
Isiqhamo somthi - Ukubonakalisa imifanekiso ebonisa imiba yenani elithile.
Ulandelelwano lweFibonacci - Ukulandelelana apho inombolo nganye inani leenombolo ezimbini eziphambi kwayo.
Umzobo - Imilo emibili yezinto eziqhelekileyo zibizwa ngokubhekiselele kumanani.
Ukuphela - Akunakuphela. I-Finite inokuphela.
I-Flip - Ukubonakaliswa kwimilo emibini yesimo, umfanekiso wesirangqa wesimo.
I-Formula - Umgaqo ochaza ubudlelwane beenguqu ezimbini okanye ngaphezulu. I-equation echaza umgaqo.
Isihlathululo - Indlela yokubhala amanani awanamanani apheleleyo. Iqhezu ibhaliwe njenge 1/2.
Ukuphindaphinda - Inani lamaxesha apho umcimbi ungenzeka ngexesha elithile lamaxesha. Ngokuqhelekileyo zisetyenziswe ngokunokwenzeka.
I-Furlong - Iyunithi yokulinganisa - ubude obude bekwere enye yehektare.
Elinye i-furlong li malunga ne-1/8 yeekhilomitha, i-201.17 yamitha kunye neeyari ezingama-220.
IJometri - Ukufunda imigca, ii-angles, imilo kunye neepropati zabo. IJyometri ibhekiswe ngobunjwa bomzimba kunye nobukhulu bezinto.
I-Graphing Calculator - I-calculator ekhudlwana yekrini ekwazi ukubonisa / ukudweba imagrafu nemisebenzi.
I-Theory yeGrafu - Isebe leemathematika elijolise kwiipropati zeendidi ezahlukeneyo.
Iyona nto ibalulekileyo kunazo zonke. Umzekelo, into ebaluleke kakhulu ye-10 ne-20 ngu-10.
I-hexagon - Intsimbi yesithupha kunye neyesithandathu. IHex ithetha 6.
I-Histogram - Igrafu esebenzisa imivalo apho ibha nganye ibalingana nobubanzi bexabiso.
I-Hyperbola - Olunye uhlobo lwesigaba se-conic. I-hyperbola yiseti yazo zonke iindawo. Ukwahlukana kobude bawo kumanqaku amabini adibeneyo kwinqwelo eqhubekayo.
I-Hypotenuse - Icala elona lide kunabo bonke benxantathu elungileyo. Njalo uhlangothi oluphambene nekona elifanelekileyo.
Ubume - Ukulingana okwenyaniso kwimilinganiselo yazo.
I-Fraction engafanelekanga - Iqhekeza apho i-denominator ilingana okanye ibanzi kunenani. Umzekelo, 6/4
Ukungalingani - I-equation yamathematika equkethe inkulu kunaleyo, ngaphantsi okanye ayilingani kunye nempawu.
I-Integers - Inani elipheleleyo, elihle okanye elibi kuquka i-zero.
Ukungangqinelani - Inombolo engenako ukumelwa njengesiqendu okanye njengeqhezu. Inombolo efana ne-pi ayinangqiqo kuba iqulethe inani elingapheliyo lamadijithi aqhubekayo kuphinda, ezininzi iingcambu zesikwele zizinombolo ezingenangqiqo.
Isoceles - I-polygon eneenxalenye ezimbini ezilinganayo ubude.
Iikhilomitha - Iyunithi yesilinganiso elingana neemitha ezili-1000.
I-Knot - Ikhefu eyenziwe ngephulaphu yokupakisha kwentwasahlobo ngokujoyina iziphelo.
Njengemigomo -Imigangatho kunye noguquko olufanayo kunye neempembelelo ezifanayo.
Njengamaqhezu - Iifrafti ezinegama elifanayo. (Inani lokubala liphezulu, i-denominator ingezantsi)
Umgca - Umzila ongagqibekanga wokujoyina inamba engapheliyo yamaphuzu. Umendo unganakulinganiswa kwimiba mibini.
Icandelo leNgcaciso - Indlela echanekileyo enokuqala kunye neyokugqibela.
Equation Linear - I-equation apho iileta zimela amanani okwenene kunye negrafu yayo ngumgca.
Umgca we-Symmetry - Umgca ohlula umzobo okanye ukuma kwiindawo ezimbini. Ubume bobabini kufuneka balingana.
I-Logic - Ukuqiqa kakuhle kunye nemithetho esemthethweni yokuqiqa.
I-Logarithm - Amandla apho isiseko, [ngokwenene 10] kufuneka sikhuliswe ukuvelisa inombolo enikwe. Ukuba i-nx = a, i-logarithm ye-, kunye n njengesi siseko, i-x.
Kuthetha - Ithetha ifana nomyinge. Hlanganisa uluhlu lwamanani kwaye uhlule isamba ngokubaluleka kwamanani.
I-median - iMedian 'ixabiso eliphakathi' kwoluhlu lwakho okanye uluhlu lwamanani. Xa amaxabiso eluhlu angabonakaliyo, umlambo ungena phakathi phakathi kwoluhlu emva kokuhlenga uluhlu ukuba lukhutshwe. Xa amaxabiso eluhlu ayenjalo, umlambo ulingana nesibalo semaphakathi emibini (emva kokuhlenga uluhlu kwandiso olwandayo) amanani ahlukeneyo ngamabini.
I-Midpoint - Iphuzu elilingane lekota phakathi kwamacandelo amabini.
Izinombolo ezixubileyo - Amanani adibeneyo abhekisela kwinani elipheleleyo kunye namaqhezu okanye ama-decimals. Umzekelo 3 1/2 okanye 3.5.
Imodi - Imodi eluhlu lwa manani lubhekisela kuluhlu lweenombolo ezenzeka rhoqo. Iqhinga lokukhumbuza le nto kukukhumbula ukuba imodi iqala ngeelwimi ezimbini zokuqala ezenziwa ngabaninzi. Uninzi kakhulu - Imodi.
I-Arithmetic yeModular - inkqubo ye-arithmetic ye-integers, apho iinombolo "zijikeleza" ukufikelela kwixabiso elithile le modyuli.
I-Monomial - I-algebraic expression elinekota elilodwa.
Amaninzi - Iqela leenombolo ngumkhiqizo wenani kunye nayiphi na enye inamba. (2,4,6,8 ziphindaphinda 2)
Ukuphindaphinda - Ngokuqhelekileyo kuthiwa 'ukukhawuleza'. Ukuphindaphinda ukunyuka ngokuphindaphindiweyo kwenani elifanayo 4x3 kufana nokuthi 3 + 3 + 3 + 3.
Ukuphindaphinda - Ubuninzi banda ngamanye. Imveliso ifumaneka ngokuphindaphinda ezimbini okanye ezininzi ezininzi.
Inombolo yemvelo - Inombolo yokubala rhoqo.
Inani elincinci - Inani elingaphantsi kwezinga. Umzekelo - umlinganiselo weshumi .10
I-Net - Ngokuqhelekileyo ibhekiswe kumatriki esikolweni esisekondari. Ifomati e-3-D eneplatiweyo engaguqulelwa into ye-3-D eneglue / tape kunye nokunyumba.
I-Nth Root - Ingcambu ye -nth yenani inombolo efunekayo ukuze iphindwe ngokwayo 'n' maxesha ukuze ifumane le nombolo. Ngokomzekelo: ingcambu yesine ye-3 ngu-81 ngenxa ye-3 X 3 X 3 X 3 = 81.
Norm - Ithetha okanye umyinge - iphethini okanye ifom.
I-Numerator - Inombolo ephezulu ngeqhezu. Kwi-1/2, 1 yi-numerator kunye ne-2 yi-denominator. Inani leenombolo liyinxalenye yesakhiwo.
Umgca weNombolo - Umgca apho onke amanqaku ahambelana namanani.
Numeral - Uphawu olubhaliweyo olubhekiselele kwinani.
I-Angle ye-Obveni - I-angle ephethe umlinganiselo omkhulu kunama-90 ° kunye no-180 °.
I-Triangle ye-Obtuse - Unxantathu kunye nekona enye engqungquthela echazwe ngasentla.
I-Octagon - I-polygon kunye namacala angama-8.
Iziphumo - Umlinganiselo / ubuncwane bomcimbi ekungenzeka ukuba kwenzeke. Iingxaki zokutshiza imali kunye nokuba nomhlaba kwiintloko zinekhefu eli-1-2.
Inombolo engekhoyo - Inombolo epheleleyo engabonakaliyo ngu-2.
Ukusebenza - Kubhekisela ekubeni ukongeza, ukususa, ukuphindaphinda okanye ukwahlula okubizwa ngokuba yimisebenzi emine kwimathematika okanye kwi-arithmetic.
Amanqaku amiselweyo - Amanani aqhelekileyo abhekisela kwindawo: yokuqala, yesibini, yesithathu njl.
Umyalelo weMisebenzi - Imigaqo yemigaqo esetyenziselwa ukuxazulula iingxaki zeemathematika. I-BEDMAS idla ngokuqhelekileyo isigama esisetyenziselwa ukukhumbula umyalelo wokusebenza. I-BEDMAS imele ' amabakaki, ukubonisa, ukwahlukana, ukuphindaphinda, ukuhlanganisa nokukhupha.
Isiphumo - esetyenziswe ngokubanzi ekunokwenzeka ukubhekisela kwisiphumo somcimbi.
I-Parallelogram - I-quadrilateral eneesethi zombini zecala elichaseneyo.
I-Parabola - Uhlobo lwekhava, nayiphina indawo ekude ngokukodwa kwinqanaba elinqanyelweyo, elibizwa ngokuba ligxininiso, kunye nomgca ochanekileyo, obizwa ngokuba ngu-directrix.
I-Pentagon - I-polygon ipiloni. Amapentagon rhoqo anamacala amahlanu alinganayo kunye nama-angles alinganayo.
Ipesenti - Isilinganiselo okanye iqhekeza apho kwikota yesibili kwi denomin ihlala ihlala 100.
I-Perimeter - Umgama wonke ujikeleze ngaphandle kwe-polygon. Ibanga elipheleleyo elijikelezweyo lifumaneka ngokudibanisa ndawonye iiyunithi zomlinganiselo ukusuka kwicala ngalinye.
I-Perpendicular - Xa imigca emibini okanye amacandelo omgca edibanisa aze afake ama-angles angakwesokudla.
I-pi p - Isimboli sePi enencwadana yesiGrike. I-Pi isetyenziselwa ukumela umlinganiselo wesigangqa sesangqa ukuya kububanzi bayo.
Isicwangciso - Xa isethi yamaphuzu ahlangene ndawonye enza i-flat plane, isicwangciso sinokuqhubeka singapheli kuzo zonke izikhokelo.
Ipolynomial - Igama lesi-algebraic. Isixa semali emibili okanye ngaphezulu. Iipolynomials ziquka iinguqu kwaye zihlala zifumana enye okanye ngaphezulu.
Amacandelo ePolandon- Line ahlangene kunye ukuze enze isimboli esivaliweyo. Imibala, izikwere, iipentagon yimizekelo yeepolgoni.
Inombolo yeNkulumbuso - Inani eliyinkunzi lilonke likhulu kune-1 kwaye lihlukana ngokwawo kunye no-1.
Unokwenzeka - Ubungakanani bokuba kwenzeka isiganeko.
UMkhiqizo - Isixa esitholakalayo xa kukho nawaphi na amaninzi okanye amaninzi amaninzi.
Isiqulatho esifanelekileyo - Iqhekeza apho i-denominator mkhulu kunani.
Iprotractor - Isixhobo esisijikelezileyo esisetyenziselwa ukulinganisa ii-angles. Umgca uhlulwe kwii-degrees.
I-quadrant - enye yekota ( qua) yendiza kwi-Cartesian system coordinate system. Idiza iyahlula zibe ngamacandelo amane, icandelo ngalinye libizwa ngokuba yi-quadrant.
I-Quadratic Equation - Ilinganiso ezingabhalwa ngelinye icala elilingana no-0. Ufuna ukuba ufumane i-polynomial ye-quadratic elingana no-zero.
I-Quadrilateral - I-polygon / ifom.
I-Quadruple - Ukwandisa okanye ukwandiswa ngu-4.
Ukufaneleka - Inkcazo jikelele yeepropati ezingenakubhalwa ngamanani.
I-Quartic - I-polynomial ene-degree ye-4.
Quintic - i-polynomial ene-degree ye-5.
I-Quotient - Isisombululo kwisingxaki sohlulo.
I-Radius - Icandelo lomgca ukusuka kwinqanaba lesangqa ukuya kuyo nayiphi na indawo kwisangqa. Okanye umgca uvela kwinqanaba lommandla ukuya kwiphina indawo ekupheleni komda. Umda ubude ukusuka kwinqanaba lesangqa / sigaba ukuya kumda wangaphandle.
Ukulinganisa - Ulwalamano phakathi kobuninzi. Imilinganiselo ingabonakaliswa ngamagama, amaqhezu, ama-decimals okanye i-percents. Umzekelo, umlinganiselo owenziwe xa iqela liphumelela kwimidlalo engama-4 kwimi-6 ingathiwa ngu-4: 6 okanye enye ibe yintandathu okanye i-4/6.
Ray - Umgca ochanekileyo kunye nepotto eyodwa. Umgca uqhubeka ungapheliyo.
Ububanzi - Umahluko phakathi kobuninzi kunye ubuncinci kwisethi yedatha.
I-Rectangle - Iparallelogram eneengalo ezine ezilungileyo.
Ukuphindaphinda kweSigxina - Isiqingatha ngokuphindaphinda kwamadijithi. Umzekelo, i-88 eyahlula ngo-33 iya kunika 2.6666666666666
Ukucamngca - Isikrini sombukiso wesimo okanye into. Ifunyenwe ekuqhubeni umfanekiso / into.
Insalela - Inombolo esalayo xa inani alikwazi ukwahlula ngokulinganayo kwinani.
I-Angle eyiyo- I-angle engama-90 °.
Triangle Triangle - Unxantathu unengalo enye elingana ne 90 °.
I-Rhombus - Iparallelogram kunye namacala amane alinganayo, macala onke afana nobude obufanayo.
Triangle Scalene - Unxantathu kunye namacala amathathu angalinganiyo.
Icandelo - Ummandla ophakathi kwe-arc kunye neerandi ezimbini zesangqa. Ngamanye amaxesha kubhekiswe njengombumba.
I-Slope - I-slope ibonisa ukukhawuleza okanye ukunyathela komgca, uzimisele ukusuka kumacandelo amabini kumgca.
Umgca wesikwele- Ukuze ubeke inombolo, uyayandisa ngokwayo. Ingcambu yecala yenani lixabiso lenani xa liphindwa ngokwalo, linika inombolo yokuqala. Ngokomzekelo i-squared 12 yi-144, ingcambu yesikwele ye-144 ngu-12.
Isiqu kunye neLeaf - Umququzeleli ocacileyo ukuhlela nokuthelekisa idatha. Ifana ne-histogram, ilungiselela ixesha okanye amaqela edatha.
Ukukhupha - Umsebenzi wokufumana umahluko phakathi kwamanani amabini okanye ubuninzi. Inkqubo 'yokuthatha'.
Iibhontshi ezongezelelweyo - ii-angles ezimbini zongezeleleka xa inani labo lilonke li-180 °.
Imimiselo - Amacandelo amabini ahambelana ngokugqibeleleyo.
I-Tangent - Xa i-angle ekhangelekileyo i-X, i-tangent ye-x ngumlinganiselo wobude becala elibhekiselele x kwicala elikufutshane no-x.
Ixesha - Inxalenye ye-algebraic equation okanye inombolo ngokulandelelana okanye uchungechunge okanye umkhiqizo wenani lokwenene kunye / okanye iinguqu.
I-Tessellation - Iindiza ze-plruent flight / shapes ezifake indiza ngokupheleleyo ngaphandle kokugqithwa.
Ukuguqulelwa - Igama elisetyenziswa kwiJometri. Ngokuqhelekileyo kuthiwa yi-slide. Ubume okanye ukuma kuthathwa ukusuka kwindawo nganye yomfanekiso / ukuma kwinqanaba elifanayo kunye nomgama.
Utshintsho - Umgca owela / ogqithisa amabini okanye ngaphezulu.
I-Trapezoid - I-quadrilateral eneendidi ezimbini ezifanayo.
Umzobo womthi - Usetyenziswe kumathuba okubonisa zonke iziphumo ezikhoyo okanye ukudibanisa kwesiganeko.
I-Triangle - I-polygon yesithathu.
I-Trinomial - I-algebraic equation nemigomo emithathu-i-polynomial.
Iyunithi - Ubungakanani obuqhelekileyo obusetyenziswa kwisilinganiselo. I intshi iyunithi yobude, isentimitha iyunithi yobude ipiliti iyunithi yesisindo.
Okufanayo - Konke okufanayo. Ukufana okufana nobukhulu, ukubunjwa, umbala, ukuyila njl
Utshintsho- Xa ibhokisi lisetyenziselwa ukumela inombolo okanye inombolo kwinani kunye namagama. Umzekelo, ngo-3x + y, zombini y kunye no-x yizona ziguquko.
Umzobo weVen - Umzobo weVenn udla ngokuphindaphindiweyo ezimbini (ezinokubakho ezinye izinto). Inxalenye ebanzi ihlala iqulethe ulwazi olufanelekileyo kwiibels kumacala omabini eDenagram. Ngokomzekelo: isangqa esinye singabizwa ngegama elithi 'Odd Numeri', esinye isangqa singabhalwa ngokuthi 'Iibini ezimbini zeNombolo zeNombolo' kufuneka ukuba zibe neenombolo ezingaqhelekanga kwaye zibe neenombolo ezimbini. Ngaloo ndlela, iziqendu ezityalwa zibonisa ubudlelwane phakathi kweetekethi. ( Unokuba ngaphezu kweetyhulo ezi-2.)
Umqulu - Iyunithi yesilinganiso. Isixa samagumbi e cubub ahlala kwindawo. Umlinganiselo wesakhono okanye ivolumu.
I-Vertex- Iphuzu le-intersection apho iindawo ezidibeneyo (okanye ngaphezulu) zidibana, zibizwa ngokuba yikhoneni. Naphi na macala okanye imiphetho idibana nama-polygons okanye imilo. Ingongoma yeconsi, iikona zeekerubhi okanye izikwere.
Isisindo - Umlinganiselo wendlela enzima ngayo into.
Inombolo epheleleyo - Inombolo epheleleyo ayinayo inxalenye. Inani elipheleleyo liyinani elipheleleyo elinama-1 okanye ngaphezulu kwaye unokuba nethuba okanye libi.
I-X-Axis - I-axis ene-horizontal kwi-plane plan.
X-I-Intercept - Ixabiso leX xa umgca okanye i-curve inqumla okanye iwele i-axis.
X - Inombolo yesithandwa somntwana ye-10.
x - Isimboli esasetyenziswa rhoqo ukumela ubungakanani obungaziwa kwi-equation.
I-Y-Axis - I-axis ecacileyo kwinqanaba lokudibanisa.
Y-I-Intercept - Ixabiso le-y xa umgca okanye ikhefu inqumla okanye iwele i-y axis.
Yard- Iyunithi yesilinganiso. Ididi i malunga ne 91.5 cm. Ididi inamamitha amathathu.
Amakhonsathi omdlalo omdlalo kwiCasino
Kutheni ukulungisa ukuPelisa kuyinzuzo
Indlela yokuchitha ixesha lakho lokubhukuda
Iincwadi kunye neeBlogs malunga nokuLawulwa kweNkcubeko
Ukudibanisa iKholeji yeeKholeji
Ukuphila kwiSigramental Life
Ukukhula koLuntu kunye noMbutho kwiNguqulelo yezoPhuhliso
Ama-Liberal Atheists ngokumelene namaKristu akhonzayo
I-Federal Federal Aid Aid kunye neFASFA